Waa kuwee LIXDA koox ee diiddan in la soo billaabo horyaalka xilli ciyaareedkan? – Gool FM
Waa kuwee LIXDA koox ee diiddan in la soo billaabo horyaalka xilli ciyaareedkan?
Haaruun May 4, 2020
(London) 04 Maaajo 2020. Maamulka Premier League ayaa mucaarad kala kulmaya lix koox oo ka ciyaaraha horyaalka EPL ka hor kullanka lagu go’aaminayo ‘Mashruuca Dib-u-billaabista’.
Maamullada 20-ka koox ee horyaalka Ingiriiska ka ciyaara ayaa Jimcahan soo socda ka qayb qaadan doono codeyn loogu gacan taagayo dhaqan galinta mashruucan cusub.
14 ka mid ah 20-ka koox ayaa raacsan in xilli ciyaareedkan la soo billaabo, balse lixda koox ee ugu hooseeya horyaalka ayaa ka soo hor jeestay qorshahan.
Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa iyo Norwich ayaa dhammaantood walaac ka muujiyay qorshaha dib loogu soo bilaabayo horyaalka, xilli dhammaantood ay u dagaallamayaan inay ka badbaadaan u laabashada horyaalka heerka labaad.
Waa in codadka ay noqdaan farqi 14-6 si loo meel mariyo mashruucan, waxaana ay uu muuqataa in farqigaas uu sameysmi doono marka lagu saleeyo sida ay hadda kooxaha ugu kala fikrad duwan yihiin.
Maadaama lixda koox ee ugu hooseeya kala sarreynta horyaalka ay ka soo hor jeedaan dib loo soo bilaabo, halka kooxaha ka sarreeya ay u ole’oleynayaan in xilli ciyaareedka la sii wado.
Newcastle, Southampton, Burnley iyo Crystal Palace ayaa iyaguna daraf kale ku dhagan oo doonaya in horyaalka la gabagabeeyo.
West Ham iyo Brighton madaxdooda ayaa horraan si cad u qeexay in la soo billaabo xilli ciyaareedka iyadoo Hammers oo ku dhibco ah Bournemouth ay ku jirto halka looga laabto horyaalka, xilli Brighton labo dhibcood ay ka sarreyso kooxda London ka dhisan
Si kastaba ha ahaatee, xaaladda caafimaad ee dalka Ingiriiska ayaa wali walaac laga muujinayaa, iyadoo Aston Villa madaxeeda fulinta ee Christian Purslow uu cod dheer ku sheegay in laga dhur sugo inta ay xaaladda sugeyso.
Jawaabta maamulka Premier League ayaa noqotay in 1,000 baaritaan oo la xiriira coronavirus toddobaadkiiba, halka lasoo koobi doono dadka loo ogolaan doono garoommada oo ugu badnaan loo ogolaan doono 300 xubnood oo ka kooban dhamaaan ciyaartoyda, shaqaalaha kooxaha iyo saraakiisha garsoorka.
Taasi kama dhigna in xaaladda caafimaad oo idil xal loo helay, maadaama tallaal la’aan aysan suurtagal ahayn in gabi ahaanba la dammaanad qaado qof walba caafimaadkiisa.
Isku soo wada duube, haddii kulanka codad tirsiga ee Jimcaha lagu balansan yahay uu ku soo idlaado farqi codad oo ah 14-6, xilli ciyaareedka waa la sii wadi doonaa, iyadoo 12-ka June dib loo baasan doono.
Figo oo furka ku tuurray macallinkii sida daran u bahdilay xirfaddiisa… (Waa macallin hadda shaqeeya)
Kooxda Sao Paulo oo xaqiijisay in Real Madrid ay xiiseynayso mid ka mid ah xiddigaheeda